Amnesty International: Ciidamada Cameroon waxay jidh dilaan dadka lagu tuhmo Boko Xaraam - BBC News Somali
Amnesty International: Ciidamada Cameroon waxay jidh dilaan dadka lagu tuhmo Boko Xaraam
Warbixin cusub oo ay hay'adda u doodda xuquuqda aadanaha ee Amnesty International soo saartay ayaa sheegtay in tan iyo sanadkii 2013-kii ay tobannaan qof oo lagu tuhunsanaa in ay ka tirsanyihiin Boko Xaraam ay jidh dil ciidamada nabadgelyada Camaroon u geysteen u dhinteen.
Hay'addan oo fadhigeedu yahay dalka Ingiriiska ayaa sheegtay in ay dawladda Cameroon hor dhigtay caddaymo ay ka soo ururisay dadka sheegaya eedaha dambiyada dagaalka ee dhacay laakiin aanay wax jawaaba ka helin.
Amesty International waxay sheegtay in boqolaal qof oo la tuhunsanaa ay xidheen xoogaga nabadgelyada Cameroon iyagoon badanaa caddeymo ku haynin ama wax aad u yar haya.
Ragga dagaalamyey waxay da'doodu u dhaxaysay sideed iyo toban ilaa shan iyo afartan jir laakiin dadka la xidhay waxa ku jira dumar iyo caruur.
Hay'addu waxay sheegtay in dadkaa dhibaneyaasha ah la garaacay oo lagu khasbay in ay galaan xabsi xidhiidhi ah iyo in biyo lagu hafiyey. Amnesty International waxay warbixinteedan ku salaysay waraysiyo laga qaaday dadka dhibaneyaasha ah, waxaanay qiyaasaysaa in tobannaan qof oo xidhnaa ay dileen xoogagga nabadgelyadu.
Laakiin waxay sheegaysaa in tirada saxda ahi intaa ka badan karto. Cidhifka ugu shisheeya ee woqooyiga Cameroon ee xadka la leh woqooyi bari Nigeria iyo qaybo ka mid ah Chad iyo Niger ayaa kacdoonka Islaamiyiinta Boko Xaraam burbur gaadhsiiyey.
Amnesty International warbixinteedu waxay sidoo kale eedaysay askar Faransiis iyo Maraykan ah oo meel ka mid ah meelaha dadka lagu jidh dilay joogay. Hay'addu waxay sheegtay in aanay jirin caddaymo muujinaya in xoogag shisheeye ku lug leeyihiin dagaalka gobolka ka socda. Laakiin waxay ugu baaqday dalalkaas dawladahooga in ay baadhaan in ciidamadoodu isha ka laliyaan jidh dilka dhaca iyo in kale.